Padbury bu ihe nlere di mfe na nke pere mpe maka Mac | Esi m mac
Padbury bu ihe nlere di mfe na nke pere mpe maka Mac
N'ọtụtụ oge, ndị ọrụ na-arịọ anyị ka anyị nweta ihe ngebichi na-atọ ụtọ ma dị mfe iji debe Mac, ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị chọrọ ụdị nyocha a, anyị ga-ahapụrụ gị Padbury kpamkpam ma dịkwa mfe. Ihe anyị ga - eji nweta ya Padbury nwere ihu igwe ojii zuru oke yana elekere dị n'etiti. Na nke a anyị ga-echebe Mac anyị n'anya ndị ọzọ na anyị ga-enwekwa a screensaver na purest Apple ịke ọ na-eri.
Ndị ọrụ na-eji ya na Macs na-enwe obi ụtọ na ịdị mfe nke ya na onye okike nke Padbury nwere ọbụna Ntuziaka Instagram ebe eji hashtag #Padburyclock Tinye ihe oyiyi ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala tinye ha na ndị ọrụ afọ ojuju gị. Ọ bụ eziokwu na ọ na-aga kemgbe ọnwa Mee 22, 2015 n’etinyeghi ihe ọ bụla, mana anyị nwere ike ịkekọrịta ozi a oge niile ka o rute ọtụtụ mmadụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ya na foto okike, ọ ka mma.
Ihe nyocha a abụghị ihe ọhụụ ọ bụla, ọ dịlarị ogologo oge nye ndị niile chọrọ iji ya mana ịlele weebụ ma hụ ụfọdụ nyocha ihuenyo nke anyị bipụtara na weebụ, nke a adịghị ebe ahụ. N'ihi nke a, anyị chọrọ ịhapụ nhọrọ a maka ndị niile na-achọ ihe ntanetị dị nfe na nke ahụ na-enye anyị ohere ime mgbanwe ụfọdụ na ya. N'okwu a naanị nkọwa anyị nwere ike imetụ aka na Padbury bụ iji dezie elekere na ọnọdụ 12 ma ọ bụ 24 elekere, ndị ọzọ anaghị ekwe ka mgbanwe ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Padbury bu ihe nlere di mfe na nke pere mpe maka Mac
Onye isi ala a na - ahọpụta Donald Trump kwuru na Tim Cook kpọrọ ya mgbe o meriri mmeri
Ọgụ mwakpo ọhụụ na ndị ọrụ Apple